Ciidamo Gaar ah iyo Saraakiil Tababar ku soo Dhameystay Dalka Imaaraatka Carabta oo dib ugu soo laabtay Soomaaliya (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamo Gaar ah iyo Saraakiil Tababar ku soo Dhameystay Dalka Imaaraatka Carabta oo dib ugu soo laabtay Soomaaliya (Sawirro)
5th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Waxaa maanta oo Sabti ah dalka dib ugu soo laabatay ciidamo gaar ah iyo saraakiil lagu soo tababaray dalka Imaaraatka Carabta. Ciidammadaas oo loo soo tababaray ilaalinta Madaxtoyada Somalia iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee caasimmadda.
Tirada ciidankan sida gaarka ah loo soo tababaray ayaa waxay gaareysaa 58 askari oo ay ku jiraan dhowr saraakiil sar sare ah, waxayna ku soo qaateen dalka Imaaraatka Carabta tababar socday muddo labo bilooda ah.
Ciidamadan iyo saraakiishan oo la socday diyaarad gaar ah oo ka soo qaaday dalka Imaaraatka carabta ayaa waxaa gegida diyaardaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Madax ka tirsan madaxtooyada Somalia iyo saraakiil ciidan iyo madax ka tirsan Safaaradda dowlada Imaaraatka carabta ee dalka soomaaliya.
Ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada Mudane Cabdi Muxumed Axmed oo ka hadlay munaasabaddi soo dhaweynta ayaa u mahad celiyay dowladada Imaaraatka carabta kuna ammaanay taageerada dhinac walba leh ee ay la garab tagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Anigoo ku hadlaya magaca madaxtooyada Somalia waxaan aad uga mahad celineynaa taageerada dowladda aan walaalaha nahay ee Imaaraatka nala garab taagan tahay, mar walba xag dhaqale iyo xag siyaasadeed iyo xag ciidan intaba” ayuu yiri mudane Cabdi Muxumed agaasime ku xigeenka madaxtooyada.
Waxa kale oo uu agaasime ku xigeenka madaxtooyada uu kala dardaaramay ciidanka iyo saraakiisha soo dhammeystay tababarka in ay si hufan uga soo dhalaalaan howsha loo igmaday oo ah inay sugaan ammaanka goobaha muhiimka ah ee dowladda oo ay ka mid tahay xarunta madaxtooyada.
Waxaa kale oo halkaasi ka hadaly Col. Maxamed Maxamud oo ah madaxa saadka ee madaxtooyada isagoo sheegay in taageerada dowladda Imaaraatka Carabta ay tahay mid muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa dalka Somalia ka wadda mashaariic kala duwan oo isugu jira kuwo bani aadannimo iyo kuwo horumarineed, iyadoo dib u hagaajineysa dhismayaasha madaxtooyda Somalia, iyo sidoo kale isbitaal weyn oo ay ka dhiseyso degmada Shangaani, ee gobolka Banaadir, dhismahaas oo gabagabo ku dhow waxaa ku baxaysa lacag malaayiin dolar ah. Waxaa kale oo mashaariicda dowlada Imaaraatka ay ka fulineyso Somalia ka mid ah; dhismaha Iskullo, Xarumo ciidan, Saldhigyo Boolis, iyo ceelal biyo iyo dowladaha hoose ee gobollda dalka.
Waxaa kale oo ay dowlada Imaaraatka taageero ballaran u fidisay dadkii ku barakacay daadadkii iyo dabeylihii ku dhuftay meelo badan oo ka mid ah dalka Somalia sanadkii hore. Iyadoo dowladda Imaaraatku ballan qaaday taageero ballaaran ka dib booqashadii Ra’ssal wasaare cabdiwali Sh. Axmed uu ku tagay dalkaasi horraantii bishii maarso ee lasoo dhaafay.
Dhawaaan ayay aheyd markii Safiirka Imaaraatka ee Somalia Danjire Maxamed Al-Cuthman uu waraaqihisa aqoonsiga u gudbiyay Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Somalia Mudane Burci Mxamed Xamza, iyadoo la filayo in madaxweynaha Somalia mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu isaguna ka gudoomo waraaqaha aqoonsiga danjira dowladda Imaaraatka carabta.
Wiil uu dhalay ganacsade Soomaaliyeed oo caan ah oo lagu dilay Nairobi
Ciidamada Uganda ka jooga Soomaaliya oo cayil la tegay